ထိုင်ဝမ် (7Days)KH-5101 AA
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အလှတရားများစုဝေးရာ မြို့ လေး။
Day : 1 Yangon – TaiPei -Tao Yuan City (Lunch on flight, Dinner)
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကာ Taiwan Taoyuan International Airportသို့ည 9:00တွင် ရောက်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော Taiwan ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာTao Yuan City သို့ ပို့ဆောင်ကာ Hotel တွင် တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :2Tao Yuan City- Taipie - Yehilu Geopark – Jiufen –Hualien (breakfast,Lunch,Dinner)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာသုံးဆောင်ပြိးနောက်ရေတိုက်စားမှု့ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဘုရင်မဦးခေါင်းကျောက်ဆောင်(Queen’sHead)နှင့်မှိုပွင့်သဏန်ဖြစ်ပေါ်နေသောကျောက်ဆောင်များရှိရာ Yehliu Geo park သို့သွားေ၇ာက်လည်ပတ်ပါမည်။ထို့မှတဆင့်တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်သော JiuFen Old Village မြို့သို့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Hsuehsha Tunnel မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်သို့ ဖြတ်ပြီး Hualien သို့ သွားရောက်ပါမည်။ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Hualian – Taroko National – Eternal Spring- Swallow Grotto-Pisilian-Taitung
Hotelတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်သာယာလှပလွန်းသောတောင်နံရံ၊ ကျောက်နံရံ၊ရေပြာအိုင်များရှိသောHua Lian မြို့သို့ထွက်ခွာပါမည်။ရောကိလျှင်Ta RoKo Gorge သို့ သွားရောက်ကာ Eternal Spring နှင့်ဥမင်လှိုင်ခေါင်း နှင့် ဆက်၍ တံတားဆောက်လုပ်ထားသည့် Swallow Grotto သို့ လည်ပတ်မည်။ထို့တောင် Taitung Country ရှိ အလွန်လှပသော Pisilian သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်။နေ့လည်စာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotelတွင်အိပ်စက်အနားယူမည်။
Day :4Taitung- Fo Guang Shan –E-DAWorld Theme Park –Kaohsiung (Breakfast,Lunch,Dinner)
Hotel တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Kaohsiung မြို့ရှိ ထိုင်ဝမ်မြို့၏အကြီးမားဆုံးဗုဒ္ဒဘာသာ ကျောင်းဖြစ်သောFOGuangShanBuddhaMuseumသို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ထို့်နောက်နာမည်ကျော်ကစားကွင်းဖြစ်သော E-DA World Theme Park သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ Xinjuejuang NightMarket သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :5Kaohsiung- Nantou -Sunmoon Lake –Formosan Aboriginal Culture Village- Yizhong Street –Chiayi(Breakfast/Lunch/Dinner)
Hotelတွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး နောက် Sun Moon lake ရေကန်သို့သွားရောက် အပျော်စီးလှေစီးကာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှု့ခံစားပြီးနောက်အနီးတွင်ရှိသောDutyFreeဆိုင်ကြီးတွင်ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ထို့နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းကောင်းပြိးကစားနည်းအစုံကစားလို့ရမယ့်AmusentPark တစ်ခုဖြစ်သော FormosanAboriginalCultureVillage သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ Yizhong Street Market သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6Taichung-Brewery Factory –TakeTRA-CKS Memories Hall-Taipie101 -Taipie
Hotelတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Brewery Factory သို့ သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ပြီးလျှင် TRA စီးပြီး Taichung မှ Taipie သို့ သွားရောက်မည်။ ထိုင်ဝမ် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးဖြစ်သော Chiang Kai Shek Merorial Hall နှင့် TaiTeiမြို ၏မိုးမျှော်အဆောက်အဦးဖြစ်သော 101 Tower သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :7Taipie-Taoyuan Airport –Yangon (Breakfast,Lunch,Dinner)
Hotelတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးHotel check out လုပ်ကာ လေဆိပ်သို့ထွက်ခွာပြီး ရန်ကုန်သို့ ပြန်ပါမည်။
1.	3 Star Hotel accommodation for 6night with twin sharing basis
2.	International flight fare
3.	Myanmar Tour Leader
4.	Meals as per itinerary
5.	Transportation as mention in the itinerary
6.	English speaking guide
7.	Entrance & Zone fees as in itinerary
8.	Visa fees & application fees